Blac Chyna naSoulja Boy vakakamurana mushure memavhiki ekudanana - Nhau
Blac Chyna naSoulja Boy vakakamurana mushure memavhiki ekudanana
Blac Chyna uye Soulja Mukomana vaputsa mushure memavhiki mashoma ekufambidzana, uye zvinoita sekunge ex wake aive nechokuita nazvo.
TMZ yakashuma neChina kuti vaviri vacho vakagumisa zvinhu mushure mekupokana nharo pamusoro pazvo Tyga , uyo Chyna anogovera mwanakomana naye. Chyna uye Soulja Mukomana 'vakatanga kupopotedzana nezve vavariro yechokwadi yeumwe neumwe muhukama hwavo,' iyo webhusaiti yakataura.
Mushure mekuparadzaniswa, Tyga Akatumira yakajeka graph, asi akazobvisa. Akabva atora mugwagwa wepamusoro.
'Kukumbira ruregerero kuna Blac Chyna nevateveri vangu nezve yapfuura tweet,' akanyora kudaro. 'Blac Chyna neni tine hushamwari hwakafanana hapana chimwezve chakaderera.'
Mazuva mashoma pamberi pekuparadzaniswa, TMZ yakati hukama hwatanga sekudzorera kutsiva - vese vaida kutsika Tyga , who Soulja Mukomana ane nyama yemombe ine. Sekureva kweshumo, vaviri ava vakaronga zano rekunyepedzera kunge vaidanana, asi rakazopedzisira rave hukama chaihwo.
Muchokwadi, musi waFebruary 13, Soulja Mukomana tweeted kuti aive 'murudo.'
- Soulja Boy (Drako) (@souljaboy) Kukadzi 13, 2019
Pakupedzisira kurambana kuri pachena kwanga kusiri kungoenderana ne Tyga .
'Soulja naChyna vanga vasiri pahurefu hwakaenzana,' akadaro TMZ, achiti rapper uyu aida kubuda nekufamba, nepo Chyna aida hukama hwakaderera. Chyna akazonzwa kuti Soulja Mukomana 'yanga isina kugadzirira kuzvipira,' webhusaiti yakataura.
Iko kupatsanurwa kunogona kuve kupfupi kurarama. TMZ yakati pane mukana wekuti vaviri ava vayananise.
Elisabeth Hasselback anopomera Meghan McCain yekumiririra zvisizvo zvaakataura pamunamato, COVID-19
kat kubva d runako mabasa
jane seymour playboy mushwi pics
miranda lambert kubiridzira blake
kangani janet jackson akaroora